ZCC Coin စျေး - အွန်လိုင်း ZCC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZCC Coin (ZCC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZCC Coin (ZCC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZCC Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZCC Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZCC Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZCC CoinZCC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$100ZCC CoinZCC သို့ ယူရိုEUR€84.21ZCC CoinZCC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£76.12ZCC CoinZCC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.91.01ZCC CoinZCC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr897.47ZCC CoinZCC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.627.28ZCC CoinZCC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2217.2ZCC CoinZCC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł372.04ZCC CoinZCC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$133.19ZCC CoinZCC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$138.3ZCC CoinZCC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2240.67ZCC CoinZCC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$775.02ZCC CoinZCC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$533.28ZCC CoinZCC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7490.35ZCC CoinZCC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16865.6ZCC CoinZCC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$136.92ZCC CoinZCC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$149.64ZCC CoinZCC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3108.09ZCC CoinZCC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥695.35ZCC CoinZCC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10558.15ZCC CoinZCC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩118418ZCC CoinZCC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦37900ZCC CoinZCC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7321.55ZCC CoinZCC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2771.18
ZCC CoinZCC သို့ BitcoinBTC0.00847 ZCC CoinZCC သို့ EthereumETH0.253 ZCC CoinZCC သို့ LitecoinLTC1.69 ZCC CoinZCC သို့ DigitalCashDASH0.998 ZCC CoinZCC သို့ MoneroXMR1.06 ZCC CoinZCC သို့ NxtNXT7236 ZCC CoinZCC သို့ Ethereum ClassicETC14.06 ZCC CoinZCC သို့ DogecoinDOGE27824 ZCC CoinZCC သို့ ZCashZEC1.04 ZCC CoinZCC သို့ BitsharesBTS3831 ZCC CoinZCC သို့ DigiByteDGB3632 ZCC CoinZCC သို့ RippleXRP328.5 ZCC CoinZCC သို့ BitcoinDarkBTCD3.37 ZCC CoinZCC သို့ PeerCoinPPC353 ZCC CoinZCC သို့ CraigsCoinCRAIG44557 ZCC CoinZCC သို့ BitstakeXBS4170 ZCC CoinZCC သို့ PayCoinXPY1707 ZCC CoinZCC သို့ ProsperCoinPRC12269 ZCC CoinZCC သို့ YbCoinYBC0.0526 ZCC CoinZCC သို့ DarkKushDANK31355 ZCC CoinZCC သို့ GiveCoinGIVE211642 ZCC CoinZCC သို့ KoboCoinKOBO21923 ZCC CoinZCC သို့ DarkTokenDT92.11 ZCC CoinZCC သို့ CETUS CoinCETI282195